10 Days njegasi Na Bavaria Germany | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Days njegasi Na Bavaria Germany
Ọ bụrụ na ị ka malitere na-eme atụmatụ a njem site Bavaria na Germany, eleghị anya ị na-eche echiche banyere njegasi. Ị na-yikarịrị bụkwanụ na Ọnụ ọgụgụ buru nke ịtụnanya ebe ileta. Plus, ị chọrọ dabara ha niile na a 10 ụbọchị njegasi na Bavaria.
Bavaria nwere ọtụtụ ihe na-enye, na na bụ maka ụfọdụ. Ị nwere ike ịga a ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ebube obodo Bavaria, dị ka Munich, ọmụmaatụ. I nwekwara ike na-aga na ezigbo Bavarian biya ụzọ ma ọ bụrụ na ị na-a connoisseur biya.
Anyị ga-enye gị a zuru ezu njegasi maka Bavaria, na niile ị ga-mkpa na-eme bụ iso ya na-enwe a magburu onwe oge! Ya mere, ka anyị na-anya.
Okporo ígwè Transport bụ ihe kasị Environmentally Enyi na Enyi Way To Travel. nkena-isiokwu e dere na-akụziri banyere Train Travel site Save A Train, Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
Olee Ihe Ị Mkpa Ịmata Tupu Anyị malitere Anyị 10 Day njegasi Na Bavaria?
Tupu anyị na-amalite, e nwere ihe ole na ole mkpa ka ị mara.
Bavaria bụ nnukwu ógbè, na ị nwere ike mfe na-eji izu ya. Ọ bụ eleghị anya na ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ihe niile n'ụzọ zuru ezu.
Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-aga n'ihi na a 10 ụbọchị njem, mgbe ahụ ị ga-ebipụ ụfọdụ ihe. Ihe ọzọ bụ na, ọ ga-abụ ihe kasị mma na-aga via ụgbọ okporo. Ọ bụrụ na ị ga-eme na, ị ga-enwe na-esi n'ebe nile ọ bụla na oge. Na n'elu nke, ị ga-enwe ohere na-agba àmà kasị ukwuu echiche Bavaria na-enye.
Ọzọkwa, aga ụgbọ okporo ígwè site Bavaria dị mfe na ọnụ. Tiketi dị ọnụ ala, na ị nwere ike ịga n'akụkụ ọ bụla nke ógbè.
N'ikpeazụ, mkpa ka ị mara mgbe ileta Bavaria. The ugboro gị 10 ụbọchị njegasi na Bavaria kwesịrị ikpuchi na-ọ bụla si September ka October. Ị ga zere ìgwè mmadụ, na ị ga-enweta ohere nleta Oktoberfest.
Ugbu a, na ihe nile nke na-kpuchie, ka anyị na-anya na gị na njegasi:
Bavaria njegasi Day 1 na 2: Munich
Mgbe aga Bavaria, i nwere na-amalite na Munich. Na mbụ, ọ dị mfe iru, N'agbanyeghị ebe ị nọ na Europe. Ị nwere ike iri a ụgbọ okporo ígwè si fọrọ nke nta n'ebe ọ bụla na-eru Munich. ma ọ bụ, ma ọ bụrụ na ị na-na-abịa site ebe dị anya na, i nwere ike ofufe. Munich bụ nnukwu obodo na Bavaria, na ụgbọ elu ofufe ya si ọtụtụ ndị na obodo gafee n'ụwa. Ọ bụrụ na ọ bụghị na, ị nwere ike mfe iru ya site na-efe efe ka ọzọ isi obodo na mgbe aga Munich.
Plus, ka anyị ghara ichefu na ọ bụla 10 ụbọchị njegasi na Bavaria ike-ezu ezu enweghị Munich. Ị ga doro anya na a na-obodo a kpokọtara ebe nleta. Site pụtara elekere elu na Englisher Garten, ị ga-enwe nza nke ebe nleta.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ihe dị ukwuu nke na ọ dị ka o kwere, anyị ndụmọdụ gị ọnụnọ ke center. nke ahụ ụzọ, ị ga-enwe ike iji ihe niile na ụkwụ.
Site na njedebe nke ụbọchị 2, ị kwesịrị abịa akpa gị na gaa n'obodo Berchtesgaden.
3 na 4: Berchtesgaden na gburugburu National Park
Berchtesgaden dị na South East nke Bavaria. Ọ bụ a obere akpa uwe ala na ókè-ala na Austria. Ị ga-ahụ ihe ndị kasị mma National park na Germany na mpaghara ebe a. Plus, ị ga-esi na-eji oge ụfọdụ na kpokọtara obodo nke Berchtesgaden.
N'ikpeazụ, ị ga-gaa na Lake Konigsee na Eagles akwu. Lake Konigsee bụ ndị kasị elu ọdọ ke Germany gbara ebube ugwu. Ma ihe ndị Eagles akwu, niile akụkọ ihe mere buffs ga-n'anya ịga na ya, dị ka ọ bụ iwu post nke ndị Nazi.
Ọ bụrụ na ị chọrọ mix ihe elu, i nwere ike na-aga Salzburg. The obodo bụ nso n'ókè na Berchtesgaden, na na ọ bụ dokwara kpokọtara na Salzburg!
Ị nwere ike mgbe ahụ kwụsị gị ebube ụbọchị na nri abalị na Berchtesgaden. Mgbe ọ nọrọ abalị, i nwere ike ịga na na na-esonụ na-aga na ụbọchị 5.
Munich na Berchtesgaden
Linz na Berchtesgaden
Innsbruck na Berchtesgaden
Bavaria njegasi Days 5, 6, na 7: Garmisch Partenkirchen, Zugspitze, Na Neuschwanstein Castle
Nzọụkwụ na-esonụ na gị 10 ụbọchị njegasi na Bavaria na-agụnye ụfọdụ ndị kasị ọmarịcha ebe na Germany. ozugbo ụbọchị 5 amalite, ị kwesịrị hop na a ụgbọ okporo ígwè na Garmisch Partenkirchen.
Ebe a bụ ihe ị ga-enwe a na mpaghara:
Day 5: Dozie ke leta isi akụkụ nke obodo.
Day 6: Gaa na kpokọtara Neuschwanstein Castle. Ị maara ya dị ka otu n'ime ihe ndị kasị iconic castles na ụwa. Ọ bụ ezigbo fairytale nnukwu ụlọ na onye na n'ike mmụọ nsọ na Disney nnukwu ụlọ.
Day 7: Gaa na nzuko nke Zugspitze, nke pụtara nso obodo. Ebe i nwere ike na-otu nke kasị mma echiche nke Alps. Ụfọdụ ndị na-soro bulie onu, ma anyị ndụmọdụ gị na-cable ụgbọ ala.
Nke a ga-ndị fọdụrụ n'ezinụlọ akụkụ nke njem gị na ihe dị mkpa onye na buut. on ụbọchị 8, ị nwere ike ibugharịa na Rothenburg.
8: Rothenburg njegasi Na Bavaria
Day 8 debeere a ogologo ụgbọ okporo ígwè na na yi obodo nke Rothenburg Ob der Tauber. Ị na-adịghị echegbu onwe ya na ndị na-agba ịnyịnya bụ ogologo, ị ga-enwe ọtụtụ nke oge gaa na nke a ọmarịcha obodo. Ọ bụ nnọọ obere, na i nwere ike ịhụ na ọ na otu n'ehihie.
Site na njedebe nke ụbọchị, i nwere ike iri nri na Schneeballen. Ọ bụrụ na ị chọrọ, i nwere ike ịnọ abalị, ma ọ bụ i nwere ike ịga na na na-esonụ na-aga: Nuremberg ma ọ bụ Wurzburg.
Bavaria njegasi Days 9 na 10: Nuremberg Ma ọ bụ Wurzburg
Nuremberg bụ nke abụọ nnukwu obodo nke dị n'ógbè Bavaria. Ọ bụkwa a ga-eleta ebe gị 10 ụbọchị njegasi na Bavaria. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ, ị nwere ike mgbe niile ịgbanwee ya Wurzburg. Ma n'obodo ndị dịtụ nso onye ọ bụla ọzọ na Rothenburg, otú ahụ ka njem akụkụ ga-adị mfe.
Ma obodo ndị kpokọtara na jupụtara Medieval akụkọ ihe mere eme na castles. Ya mere, ọ bụ n'ezie ruo ị na-ekpebi nke na otu onye bụ ihe na-akpali.
Dị ka ị ga-enwe ihe fọrọ nke nta abụọ zuru ezu ụbọchị, ị pụrụ ọbụna na-enwe ike ịga na ma.
Ya mere, e na ọ bụ. Your 10 ụbọchị njegasi na Bavaria, Germany. Anyị n'aka na-agụnye ọ bụla mkpa na-akwụsị na a ebube n'ógbè Europe. Anyị na-gụnyere otú iru ha nile ji ụgbọ okporo ígwè n'ezie na-enwe niile anwansi ya nwere na-enye.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere njegasi Na Bavaria, na-eche free kọntaktị Save A Train.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “A 10 Day njegasi Na Bavaria Germany” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fitinerary-bavaria-germany%2F የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)